बाटोमा बिग्रिएको मोटरसाइकल जहाँको तहीँ बनाउन आउने, आफ्नो घर वा कार्यालयमै मोटरसाइकल सर्भिसिङका लागि लिन आउने भए कति जाती हुन्थ्यो ? उपत्यकामा मोटरसाइकल धनीको यो साझा इच्छा पूरा गर्ने उद्देश्य राख्छ– थर्ड ह्वील ।
स्टार किड’ लाई डेब्यु गराउन खप्पिस छन्, करण जोहर । नातावादलाई प्रश्रय दिएको भन्दै उनको आलोचना पनि हुन्छ । तर उनका ब्यानरबाट अभिनय सुरु गरेको जोकोहीले लोभलाग्दो ख्याति कमाएका छन् । वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा र आलिया भट्ट पछिल्लो उदाहरण हुन् ।
माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्वीटरले पछिल्ला दुई महिनामा ७ करोड एकाउन्टहरू डिलिट गरेको छ । वासिङ्टन पोस्टले छापेको खबरअनुसार सफ्टवेयरमार्फत स्वचालित रूपमा सञ्चालन रहेका, नक्कली एकाउन्टहरू डिलिट गरेको जनाइएको छ ।
गत साता अन्य कम्पनीहरूले जिमेल प्रयोगकर्ताको इमेल पढ्न सक्छन् भन्ने खबरले तरंग ल्यायो । वाल स्ट्रिट जर्नलले प्रकाशित गरेको समाचारमा जिमेलबाहेक अन्य कम्पनीका डेभलपरहरूले प्रयोगकर्ताको इमेल पढ्न सक्ने दाबी गरिएको थियो ।
चर्चित ब्राउजर मोजिल्लाले आफ्नो नयाँ ब्राउजर सार्वजनिक गर्ने भएको छ । विशेषत: प्रविधिमा रुचि राख्ने समूहलाई लक्षित गरी सार्वजनिक गर्न लागिएको यो ब्राउजरको नाम फेनिक्स हुनेछ ।
मानिस दिनभरि दौडिँदा पनि थाकेन भने के हुन्छ ? वा जति घण्टा काम गर्दा पनि शरीर गलेन भने नि ? यो यस्तै परिकल्पनाका साथ म्यासाचुसेट्स युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरूले मानव कंकालजस्तो देखिने नयाँ आवरण बनाइरहेका छन् जसलाई नाम दिइएको छ– एक्सोस्केलेटन ।
विश्वकप २०१८: पालो एनरिकेको
यसपल्ट स्पेनले विश्वकपमा लामो यात्रा तय गर्न नसक्नु पछाडि धेरै कारण हुन सक्छन् । त्यसमध्ये एक प्रमुख कारण हो, प्रतियोगिताको ठीक अगाडि प्रशिक्षक जुलेन लोपेटेगुईको बर्खास्ती ।
धेरैलाई थाहै होला, काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै दैनिक १००० टनभन्दा बढी फोहर जम्मा हुन्छ । त्यसलाई वैज्ञानिक रुपले विसर्जन गर्न जहिले पनि हम्मेहम्मे परिरहेको छ । कवाडी बेच्नेलाई पनि सजिलो, संकलकहरुलाई पनि सजिलो र कवाडीवालाहरुलाई पनि सजिलो होस् भनेर बनाइएको एप हो, ‘कवाडी एट् योर डोरस्टेप’ ।
अहिले फुटबलको विश्वकप चलिरहेको स्थितिमा मनोरञ्जनको क्षेत्रबाट ठूलो समाचार के हुन सक्छ र ? हुन सक्छ, यी हुन्, क्यानाडेली हिपहप स्टार ड्रेक र उनको नयाँ एल्बम ‘स्कोरपियन’ । उनको यो पाँचौं एल्बम हो र यसले अहिले विश्व संगीतमा धुम मच्चाइरहेको छ, त्यो पनि रिलिजको एक साताभित्रै । यूएस चार्ट्समा त यसले तहल्का नै मच्चाएको छ भन्दा हुन्छ ।